Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo Maalinta Shaqaalaha Adduunka awgeed hambalyo u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo Maalinta Shaqaalaha Adduunka awgeed hambalyo u...
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo Maalinta Shaqaalaha Adduunka awgeed hambalyo u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Maalinta Shaqaalaha Adduunka awgeed waxaa uu Maanta hambalyo u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Shaqaalaha Soomaaliyeed uga mahad-celiyay sida ay uga shaqeeyeen dib u dhiska iyo horumarinta dalka, laga soo bilaabo dadaalladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ahaa ee ay ku leeyihiin halgankii xurnimo doonka iyo aasaaskii qarannimada.
Waxaa uu sheegay madaxweyne Farmaajo in dalka maanta uu la tacaalayo halis caafimaad oo uu sababay cudurka COVID-19, kaas oo dunida oo idil ku yeeshay saamayn xoog leh oo dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha iyo guud ahaan nolasha bulshada.
“Dalkeenna maanta waxaa uu la tacaalayaa halis caafimaad oo uu sababay cudurka COVID-19, kaas oo dunida oo idil ku yeeshay saamayn xoog leh oo dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha iyo guud ahaan nolasha bulshada.”
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dawladdu ay xoogga saartay Ilaalinta xuquuqda iyo sharafta shaqaalaha Soomaaliyeed, iyaga oo mudnaanta siiyay kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dhallinyarada.
Previous articleRuushka oo sideed sarkaal Yurub ah ka mamnuucday in ay dalkooda soo galaan iyadda oo kaga falcelineysa cunaqabateyn uu Midowga Yurub saaray.
Next articleMadaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Maxamed C/llaahi farmaajo oo Goor dhaw hor tagaya Golaha shacabka Baarlamaanka
Gudiga Doorashada uu magacaabay Farmaajo oo Mushaar la aan ka qeylinayo
Gudiga Doorashada ay magacaawday Dowlada Federaalka ayaa in mudaa la siin wax mushaar ah kuwaa oo sidaan warka ku helnay dhawaan saxaafada la hadli...
Midowga Yurub oo Joojiyay dhaqaalihii uu Siin jiray Villa Somaliya, kadib...
Wakiilka Gaarka Qaramaada midoobay Soomaliya oo war ka soo saaray...